HIM | Health in Myanmar » လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ ကုသရန် အခြေခံ ဥပဒေသ
၁။ ဖြစ်နိုင်သ၍ တခါထဲသောက်ဆေးနဲ့ ချက်ချင်း ကုသပါ။
၂။ တခြား STDs/STIs တခုခုနဲ့ လာပြသူကို Serologic testing for Syphilis ဆစ်ဖလစ် ရှိ-မရှိ သွေးစစ်ပါ။
၃။ လူနာက အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး STDs/STIs တခုခုနဲ့ လာပြရင် Pregnancy test ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စစ်ပါ။
၄။ လူနာကို STDs/STIs အကြောင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ဘို့ ကျန်းမာရေး အသိပေးပါ။
၅။ HIV ကိုပါ အစစ်ခိုင်းပါ။
၆။ လူနာရဲ့ အဖေါ် (ယောက်ျား-မိန်မ) ကိုပါ တပြိုင်နက်ထဲ ဆေးကုစေပါ။
1. Chlamydial Infections (ကလာမိုင်ဒီရယ်လ်-အင်ဖက်ရှင်)
Chlamydia trachomatitis ဗက်တီးရီးယား ကနေဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ Epididymitis ကျား-အကြောရောင်၊ Proctitis ဆီးကျိတ်ရောင်တွေ ဖြစ်စေတယ်။ မိန်းမတွေမှာ Urethritis ဆီးထွက်ပြွန်ရောင်၊ Cervicitis သားအိမ်ဝရောင်၊ PID တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေရောင်၊ Infertility ကလေးမရ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Gonorrhea ဂနိုးရီးယားရှိနေသူမှာ ဒီရောဂါပါ တွဲနေတတ်တယ်။ ပိုးရှိသူနဲ့ လိက်ဆက်ဆံပြီး ၁-၃ ပါတ်နေရင် ရောဂါလက္ခဏာတွေ စတယ်။ တချို့မှာ ပိုးရှိနေပေမဲ့ လက္ခဏာမပြဘူး။ သာမန် Urinary burning ဆီးပူတာကနေ ဆိုးဝါးတဲ့ Peritonitis ဗိုက်အတွင်းထဲက အဖုံးလွှာ ရောင်တာအထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Azithromycin 1 Gm တခါထဲ သောက်တာနဲ့ ပျောက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်
Doxycycline 100 mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ခါ၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒုတိယ-ဦးစားပေး ဆေးတွေကတော့ Ofloxacin 300 mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ခါ၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Erythromycin 500 mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၄ ခါ၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။
2. Gonococcal Infections (ဂနိုးရီးယား)
Gonorrhea ဂနိုးရီးယား Neisseria gonorrhea ပိုးကနေဖြစ်စေတယ်။
ယောက်ျားတွေမှာ Uncomplicated urethiritis ဆီးပူ-ဆီးအောင့်မယ်၊ ဆီးလမ်းက အရည်ကျနိုင်တယ်။ Chlamydial urethritis ဖြစ်တာနဲ့ အခွဲရခက်တယ်။ Epididymitis ကျားအကြောရောင်၊ Proctitis ဆီးကျိတ်ရောင်တွေ ဖြစ်စေတယ်။
မိန်းမတွေမှာ Urethritis ဆီးထွက်ပြွန်ရောင်၊ Cervicitis သားအိမ်ဝရောင်လို့ အဖြူဆင်းမယ်၊ ဆီးစပ်နာမယ်၊ လိင်ဆက်ဆံရင် နာမယ်။ ဒါတွေ ခံစားရတာ ၅ဝ% သာရှိမယ်။
ကျန်သူတွေက ပိုးသာရှိနေမယ်။ မခံစားရဘူး။ မိန်းမတွေမှာ Chlamydia ပိုးနဲ့ တွဲဖြစ်သူ ၂ဝ-၄ဝ% ရှိတယ်။ Cervicitis သားအိမ်ဝရောင်၊ PID တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေရောင်၊ Infertility ကလေးမရ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ကျား-လိင်တံ၊ မ-အင်္ဂါ၊ ပါးစပ်၊ စအိုတွေ သုံးရာကနေ ကူးစက်တယ်။ ပိုးရှိမိခင်ကနေ မွေးလာမဲ့ ကလေးကို ကူးတတ်တယ်။ Ophthalmia neonatorum ကလေး မျက်စိနာလိမ့်မယ်။ ဖြစ်တာတော့ နည်းပါတယ်။ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနည်းသူ၊ ဆီး (သေး) ကို ဆေးဝါးအမှတ်နဲ့ သုံးသူတွေမျာလဲ ကူးစက်နိုင်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံတာ ဆန်းပြာသူ ယောက်ျားရော မိန်းမပါ Rectal infection and Proctitis စအိုအထက်က အစာဟောင်းအိမ် ရောင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရောဂါရှိသူဆီက ပိုးရလာပြီး ၃-၁၄ ရက်မှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ စတယ်။ တချို့မှာ ပိုးရှိနေပေမဲ့ လက္ခဏာမပြဘူး။ တကိုယ်လုံးအနှံ့ ဖြစ်သူ ၂% ရှိတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုများတယ် အရွယ်လတ်တွေဖြစ်တယ်။ ဖြစ်စမှာ ကိုယ်ပူမယ်၊ ခြေလက်တွေမှာ အရေပြား အနီကွက်၊ ပြည်တည်နိုင်၊ ဒါတွေသက်သာပြီး အဆစ်နာဖြစ်လာမယ်။
ဆေးမကုဘဲနေရင် သူ့ဖါသာ ငုတ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူများကို ကူးစေမယ်။ တချို့မှာ တက်စေ့တွေ ရောင်မယ်။ ပြည်တည်မယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ Epididymitis ကျား အစိ-အကျော ရောင်မယ်။ မိန်းမတွေမှာ Bartholinitis မ-အင်္ဂါအဝ အကျိတ်ရောင်မယ်၊ Uretheral stricture ဆီးထွက်လမ်း ကျဉ်းမယ်၊ သားအိမ်၊ သားအိမ်ပြွန်ရောင်မယ်၊ PID တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေ ရောင်မယ်။ Secondary Infertility ကလေးမရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာ၊ Chroic pelvic pain ဗိုက်အောက်ပိုင်း နာတာရှည် နာနေတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရှားရှားပါးပါး တခြားနေရာတွေကို ရောဂါရောက်နိုင်တယ်။ Petechial or pustular skin lesion အရေပြားအနာတွေ၊ Asymetrical arthropathies, Tenosynovitis, Septic arthritis အဆစ်နာ၊ Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ Endocarditis နှလုံးသားရောင်။
Gonococcal infections (ဂနိုးရီးယား) သာမန်ဖြစ်တာအတွက် -
Ceftriaxone 125 mg IM တခါထဲ အသားဆေးထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ် Cefixime 400 mg တခါထဲသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Ciprofloxacin 500 mg တခါထဲသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Ofloxacin 400 mg တခါထဲသောက်ပါ။
Gonococcal disseminated (ဂနိုးရီးယား) ဆိုးဝါးတာအတွက် -
Ceftriaxone 1 Gm IV x 7-10 days or Ceftriaxone 1 Gm IV x 2-3 days followed by Cefixime 400 mg BD or Ciprofloxacin 500 mg BD x 7-8 days
ဒုတိယ-ဦးစားပေးဆေး = Ceftrizoxime or Cefotaxime 1 Gm IV TDS x 2-3 days followed by Cefixime 400 mg BD or Ciprofloxacin 500 mg BD x 7-8 days
3. Trichomonas infections (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်) ပိုးဝင်ခြင်း၊
မိန်းမတွေမှာ မွေးလမ်းကြောင်းကနေ အဖြူဆင်းမယ်၊ ဆီးစပ်နာမယ်။ ယောက်ျားဖြစ်ရင် လက္ခဏာ မပြဘူး။ ဆီးအောင့်တာတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Metronidazole2Gm တခါထဲသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Metronidazole 500 mg BD x7days
4. Syphilis (ဆစ်ဖလစ်)
Treponema pallidum ပိုးကနေဖြစ်တယ်။ အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိတယ်။ ပဌမတော့ လိင်ဆက်ဆံရာ နေရာတွေမှာ မနာတဲ့ အနာဖြစ်မယ်။ Chancre (ရှန်ကာ) ခေါ်တယ်။ ရာဘာကို စမ်းရသလိုနေတယ်။ ကူးစက်ပြီး ၂ ပါတ် အကြာဖြစ်တယ်။ တချို့ ပိုကြာမှ ဖြစ်တယ်။ နောက် အလိုလို ပျောက်သွားတယ်။ အနာဖြစ်တာသာ ပျောက်တာ ရောဂါပျောက်တာ မဟုတ်ပါ။ဒုတိယဆင့်ဖြစ်ရင် Rash ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါးတွေမှာ အနီပြင်တွေ ပေါ်မယ်။ မယားဘူး။ Lymphadenopathy တက်စေ့တွေ ရောင်မယ်။ ကိုယ်ပူ၊မအီမသာဖြစ်၊ ခေါင်းကိုက်၊ လည်ချောင်းနာ။ ပါးစပ်မှာ အနာဖြစ်၊ လိင်လမ်းတဝှိုက်မှာ မုံလာပွင့်လို အနာဖြစ်မယ်။ ဒါတွေလဲ မကြာခင် ပျောက်သွားမယ်။တတိယအဆင့် ဆိုတာ တချို့မှာ
လာဖြစ်တယ်။ နှစ်တွေကြာမှ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နှလုံး-သွေးကြောနဲ့ အာရုံကြော-စနစ်တွေမှာ လာဖြစ်တယ်။
ဆေးစစ်တာကို အစောပိုင်းကတည်းက လုပ်နိုင်တယ်။ Chancre (ရှန်ကာ) ပေါ်ပြီး ၂ ပါတ်နေရင် VDRL and RPR စမ်းသပ်တာ လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီနည်းက Nontreponemal test ပိုးကို အတိအကျ စမ်းတာ မဟုတ်လို့ ၁-၂% မှာ မမှန်တဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာ ပြနိုင်တယ်။ FTA-ABS ခေါ်တဲ့နည်းက တိကျတယ်။ စမ်းလို့ ခက်တယ်။
Benzathine penicillin G 2.4 million units IM weekly x3weeks
Doxycycline 100 mg BD x 14-28 days
5. Genital warts လိင်လမ်း ကြွက်နို့
Human papilloma ဗိုင်းရပ်စ် ကနေဖြစ်စေတယ်။ သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ နဲ့လဲ ဆက်စပ်နေနိုင်တယ်။ ပိုးဝင်လာပြီး အကြာကြီးနေမှ ပေါ်လာမယ်။ ဒီရောဂါကို သပ်သပ်စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်။
6. Herpes Simplex infections ရေယုံ၊
Herpes simplex virus (HSV) type2က အဖြစ်များတယ်။ type 1 က နည်းတယ်။ ပိုးဝင်လာပြီး ၂ ပါတ်အကြာ ဖြစ်တယ်။ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ၊ နာမယ် ပြည်တည်လာ နိုင်တယ်။ လိင်လမ်းရော တခြားနေရာတွေမှာပါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နီးစပ်ရာ တက်စေ့တွေ ရောင်နိုင်တယ်။ တချို့မှာ လက္ခဏာမပြဘဲ သူများကိုကူးစေတယ်။ ဖြစ်လာသူမှာ ကိုယ်ပူတာ၊ ကြွက်သားနာတာတွေ ခံစားရမယ်။ ဆီးအောင်းမယ်။ လက္ခဏာတွေရော အနာပါပျောက်သွားမယ်။ အမာရွတ် မကျန်ရစ်ဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ် ကတော့ ကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေလိမ့်မယ်။
Acyclovir 400 mg TDS x 7-10 days or Valacyclovir 1 Gm BD x 7-10 days
ဒုတိယ-ဦးစားပေး ဆေး = Famciclovir 250 mg TDS x 7-10 days
7. Chancroid (ရှိကာရွိုက်)
Hemophilus ducreyi ပိုးကနေဖြစ်တယ်။ ပိုးဝင်လာပြီး ၃-၁ဝ ရက်အနေမှာ လိင်လမ်း အနားမယ် အရည်ကြည် အဖုလေးတွေကနေ ပြည်တည်လာမယ်၊ မညီမညာ နှုတ်ခမ်းသားနဲ့ အနာတွေ ဖြစ်မယ်။ နာတယ်။ တက်စေ့တွေ ရောင်မယ်။ တဖက်ထဲမှာ ဖြစ်တာ များတယ်။ ပေါက်ထွက်ပြီး မန်းရည်တွေ ထွက်နေမယ်။
Azithromycin 1 Gm single dose or Cetriaxone 250 mg IM single dase
ဒုတိယ-ဦးစားပေး ဆေး = Ciprofloxacin 500 mg BD x3days or Erythromycin 500 mg QID x7days
8. Lymphogranuloma venereum (LGV) (လင်ဖိုဂရင်နူလိုမား-ဗာနီးရီးယမ်)
C. trachomatis ပိုးကနေ ဖြစ်တယ်။ ပိုးဝင်ပြီး ၅-၂၁ ရက်မှာ အနာဖြစ်မယ်။ မနာဘူး။ အဖုသေးသေးလေးတွေ မသိဘဲလဲ ပျောက်သွားမယ်။ စအိုမှာ ကူးရင် နာပြီးသွေးပါ ထွက်မယ်။ ပေါင်ခြံ တက်စေ့တွေ ရောင်မယ်။ ဒါတွေကနေ ပေါက်ပြီး မန်းရည်တွေ ထွက်နေမယ်။
Doxycycline 100 mg BD x 21 days
ဒုတိယ-ဦးစားပေး ဆေး = Erythromycin 500 mg QID x 21 days
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ ကုသရန် အခြေခံ ဥပဒေသ
ကျွန်တော်လိင်အရည်ပြားကနောက်ကိုအဆုံးထိဆွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေသယ်။ပိုစ်တွေဖတ် ကြည့်တော့အရည်ပြားဖြတ်ရမယ်တဲ့အရည်ပြားမဖြတ်ဘဲလုပ်လို့ရမဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားခင်ဗျာ အမြန်ဆုံးဖြေကြားပေးပါနော်။